Ndeupi mwedzi waMbudzi muchiGerman?
Unoziva here kuti izwi rekuti november rinorevei?
Ndeupi mwedzi wegore waMbudzi?
Izwi rechiGerman rekuti Mbudzi rinoreva Mbudzi. Mbudzi ndiwo mwedzi wechigumi nerimwe wegore.
Pawebhusaiti yedu, pane mwedzi nemwaka mumitauro yechiGerman uye yemuenzaniso Takadzidza mwedzi waMbudzi, kana uchida iwe unogona kudzidza ese emwedzi yeGerman nemwaka weGerman. Dzvanya kuti uwane rumwe ruzivo: Mwedzi yeGerman nemwaka mwaka wechiGerman
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi gumi yapfuura, muna Ndira 10, 24, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa muna Ndira 2021, 23.
Zvinorevei hello muchiGerman?
Manheru akanaka muchiGerman